Mudo 60 sano ah kedib abaartii ugu xumeyd oo ku dhufatay wadamada Bariga Africa oo ay Somaliya ugu horeyso.
Posted by admin on July 05 2011 21:57:12
Africa:(HS)- Abaaro aan horey loo arag mudo hada laga joogo 60 sano ka horna ugu danbeysay qaarada Africa ayaa ka jira wadamo ay Somaliya ku jirto oo lagayaabo hadaan gurmad deg deg ah loo helin malaayiin Somalia ah iney halkaasi ka soo socoto masiibo dadka iyo duunyada galaafaneysa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay QM, halka Shabaabne diideen in dadkaasi lala gaaro gurmad kedib markiiay xireen jidadkii shacabka loo marsiin lahaa cuntada.
Africa:(HS)- Abaaro aan horey loo arag mudo hada laga joogo 60 sano ka horna ugu danbeysay qaarada Africa ayaa ka jira wadamo ay Somaliya ku jirto oo laga yaabo hadaan gurmad deg deg ah loo helin malaayiin Somali ah iney halkaasi ka soo socoto masiibo dadka iyo duunyada galaafaneysa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay QM.
Abaaraha ugu daran ayaa waxey ka jiraan Somaliya oo ay shacabkoodu u dheertahay colaad joogto ah. dad badan oo ka soo hayaamay degaanadii ay deganaayeen ee gobolada Somaliya ayaa intiiba socod awoodi kartay waxey maalmahani soo gaarayeen magalda Mogdisho iyadoo tiro badan ay geedaha duurka ah ku nafbaxeen kedib markii ay jidadkii sahayda loo marsiin lahaa ay ka xireen kooxda mayalka adag ee Shabaab.
Warbxin dhawaantan QM oo iyaduba dhaqaalaha shacabkaasi Somaliyeed loogu talo galay ku qeybsada dalka KEnya ayaa isla iyagii cunay gargaarkii loowaday shacbakaasi hadane warbixin soo saaray in laga yaabo in ay wadamo badan ooku yaala Bariga Africa ay dadku u dhintaan gaajo kedib markii ay baaqdeen roobabkii la filayey. sidoo kale shacabka Somaliyeed ayaa maanta noqday kuwa caalamka ugu dhibaatada badan hadey noqon laheyd qaxootinimo, abaaro, colaad iyo siyaasadii wadanka oo ay shaqsiyaad Somali ah gacanta u galiyeen wadamo deris ah.
Ugu danbeyn Somalida qurbaha ayaa si gaar ah looga codsanayaa iney gurmad is xilqaam ah la gaaraan walaalahooda ku dhiban dalka si ugu yaraan loo bad baadiyo tiro yar oo dadkaasi ka tirsan maadama aysan jirin dowlad Somaliyeed oo wax ka qaban karta arimahaasi iyo macaluushaasi.